Melleteriga Baarma Oo Gubaya Tuulooyinka Muslimiinta Xasuuq darrana Geysanaya. – Bogga Calamada.com
Melleteriga Baarma Oo Gubaya Tuulooyinka Muslimiinta Xasuuq darrana Geysanaya.
Muslimiinta laga tiradaha badanyahay ee kunool wadanka Boorma ayaa wali lakulmaya xasuuqa uga imaanaya dhanka gaalada Buudhiyiinta xaaqidiinta ah ee sida aadka ah ula dagaallamaya faafinta diinta islaamka.
Kumanaan qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay xasuuq soo billaawday bishii agoosto ee sanaddii lasoo dhaafay kaas oo lagu tiriyo mid kamida xasuuqyadii ugu xumaa ee abid soomara muslimiinta Rohingiya ee kunool gobolka Araakaan.
warbixinno cusub ayaa sheegaya in dowladda mushrikadda Boorma ay tobanaan kun oo katirsan ciidamadeeda melleteriga iyo booliska udaad gureysay gobolka araakaan halkaas oo xasuuq kadib ay ka sameynayaan deegaameysi sharci darro ah.
Sawirro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinayay ciidamada gaalada oo saldhigyo melleteri ka sameynaya tuulooyin iyo magaalooyin kuyaal gobolka Araakaan oo dadkii deganaa lalaayay kuwan labarakiciyay.
Halkan ka degso Video ama Hoos Ka Daawo